Lulumkele Utyekelo Lwentliziyo | Isifundo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
IBhayibhile ithi: “Intliziyo inenkohliso kunayo nantoni na yaye iyatyhudisa.” (Yer. 17:9) Xa intliziyo yethu inento eyifuna ngamandla, ngaba asiye sifune izizathu zokuyenza loo nto?
IZibhalo zilumkisa zithi: “Entliziyweni kuphuma iingcinga ezingendawo, ukubulala, ukukrexeza, uhenyuzo, ubusela, ubungqina bobuxoki, izinyeliso.” (Mat. 15:19) Le ntliziyo yomfuziselo inokusikhohlisa kwisenzo esingqubana nokuthanda kukaThixo. Sisenokungaqondi ukuba iyasilahlekisa, sothuke sele senze ubuyatha. Yintoni enokusinceda sazi utyekelo lwentliziyo yethu ngaphambi kokuba sone?
LWAZI UTYEKELO ONALO—NJANI?
Ukufundisisa iBhayibhile yonk’ imihla kunaliphi igalelo kwintliziyo yethu yokomfuziselo?
Funda iBhayibhile yonk’ imihla uze ucamngce ngoko ikutshoyo.
Umpostile uPawulos wathi: “Ilizwi likaThixo liphilile, linamandla yaye libukhali ngaphezu kwalo naliphi na ikrele elintlangothi-mbini, lihlaba lide lahlule umphefumlo nomoya.” Isigidimi sikaThixo esiseBhayibhileni ‘siyakwazi ukuphicotha iingcamango notyekelo lwentliziyo.’ (Heb. 4:12) Xa sijonga sizithelekisa noko kuthethwa ziZibhalo singatsho silwazi olona tyekelo lwentliziyo yethu. Kubaluleke gqitha ukufunda iLizwi likaThixo yonk’ imihla size sicamngce ngalo, ngaloo ndlela sizuza iingcinga neembono zikaYehova!
Ukwamkela isiluleko seBhayibhile nokusebenzisa imigaqo yayo kuya kuba negalelo kwisazela sethu—oyena mntu ungaphakathi ‘ungqinelana nathi.’ (Roma 9:1) Isazela sinokusinceda siyeke ukuzithethelela xa sisenza into ephosakeleyo. Enye into, iBhayibhile inemizekelo enokunceda “ukulumkisa thina.” (1 Kor. 10:11) Ukufunda kuyo kunokusinceda siphephe ikhondo eliphosakeleyo. Yintoni ke emele yenziwe ngumntu ngamnye kuthi?
Umthandazo usinceda sazi into esiyiyo ngaphakathi
Cela uThixo akuncede wazi utyekelo lwentliziyo yakho.
UYehova “ungumgocagoci wentliziyo.” (1 Kron. 29:17) “Mkhulu kuneentliziyo zethu yaye uyazazi zonke izinto.” (1 Yoh. 3:20) Asinakuze simkhohlise uThixo. Ukuba sizityand’ igila kuye simxelele ngezinto ezisixhalabisayo, indlela esivakalelwa ngayo neminqweno yethu, uYehova unokusinceda siluqonde utyekelo lwentliziyo yethu. Sinokude simcele ‘adale ngaphakathi kuthi intliziyo esulungekileyo.’ (INdu. 51:10) Ngoko, kubaluleke gqitha ukuba sithandaze ukuze sazi ezona zinto ityekele kuzo intliziyo yethu.
Iintlanganiso zamaKristu zisinceda siqonde utyekelo lwentliziyo yethu
Phulaphula ngenyameko kwiintlanganiso.
Ukuphulaphula kwethu ngenyameko kwiintlanganiso kunokusinceda sicingisise ngomntu esinguye ngaphakathi—intliziyo. Nakuba singenakufumana inkcazelo entsha kuzo zonke iintlanganiso, ngokubakho kwethu sitsho siyiqonde ngakumbi imigaqo yeBhayibhile, nezikhumbuzo ezinokusinceda siqonde utyekelo lwentliziyo. Enye into esinceda sisulungeke ngaphakathi, ngamagqabaza abazalwana noodade wethu. (IMize. 27:17) Ukuzahlula kumaKristu singayi rhoqo kwiintlanganiso kungasenzakalisa. Kungasenza ‘sifune ulangazelelo lwethu lokuzingca.’ (IMize. 18:1) Kuya kuba bubulumko ukuzibuza oku, ‘Ngaba kulisiko lam ukubakho kuzo zonke iintlanganiso nokuzuza nto kuzo?’—Heb. 10:24, 25.
IZA KUSIKHOKELELA PHI INTLIZIYO YETHU?
Intliziyo yethu enenkohliso inokusilahlekisa kwiinkalo ezininzi zobomi. Makhe sihlolisise zibe ne: ukusukela izinto eziphathekayo, ukusela utywala, ukukhetha izinxulumani nendlela esizonwabisa ngayo.
Ukusukela izinto eziphathekayo.
Yinto yemvelo ukufuna into etyiwayo, impahla yokunxiba nendawo yokuhlala. Kodwa, uYesu wenza umzekeliso elumkisa ngokuthanda gqitha izinto eziphathekayo. Komnye umzekeliso, uYesu usichazela ngendoda esisityebi eyayinoovimba abaphuphumayo. Ngoko yayingenandawo yokuhlanganisela esinye isivuno sayo. Le ndoda yagqiba ekubeni ibachithe oovimba bayo ize yakhe abakhulu. Yathi: “Ndiza kuhlanganisela apho konke ukutya kwam okuziinkozo nazo zonke izinto zam ezilungileyo; kwaye ndiza kuthi kumphefumlo wam: ‘Mphefumlo, unezinto ezininzi ezilungileyo eziqwetyelwe iminyaka emininzi; khululeka, yitya, sela, ziyolise.’” Kodwa, esisityebi sasilibele eyona nto ibalulekile: Sasinokufa kanye ngobo busuku.—Luka 12:16-20.
Njengoko sisaluphala, sinokuzixhalabisa ngemali yokuzinyamekela xa sisidla umhlala-phantsi de siqalise ukuzithethelela ngokusebenza ixesha elongezelelekileyo kwiintsuku zeentlanganiso okanye sityeshele eminye imisebenzi yamaKristu. Akwaba singalulumkela olo tyekelo. Mhlawumbi sisebatsha yaye siyaqonda ukuba akukho nto ibaluleke njengenkonzo yexesha elizeleyo. Sekunjalo, singakubekela amangomso ukuba ngoovulindlela ngelithi simele siqale sifumane imali yokuzinyamekela. Ngaba asibobulumko na ukwenze konke okusemandleni ngoku ukuze siziqwebele ubutyebi kuThixo? Ngubani owaziyo ukuba uza kube ephila ngomso?
IMizekeliso 23:20 ithi: “Musa ukuba phakathi kwabasela iwayini kakhulu.” Xa umntu enxanwe gqitha, usenokuzithethelela ngokusela rhoqo. Usenokuthi akaseleli kunxila, kodwa uthoba nje unxano ukuze apholise ingqondo. Ukuba kufuneka utywala ukuze siphozise ingqondo, oko kuthetha ukuba lixesha lokuba siluhlolisise ngokunyanisekileyo utyekelo lwentliziyo.
Mihla le, sidibana nabantu abangamkhonziyo uYehova, enoba kusesikolweni, emsebenzini okanye xa siye kushumayela, ibe soze siyiphephe loo nto. Kodwa ke, yenye into ukuchitha ixesha nabo, de ubasondeze babe ngabahlobo bakho. Ngaba siye sikuthethelele oko sisithi baneempawu ezilungileyo? IBhayibhile ilumkisa ithi: “Ningalahlekiswa. Unxulumano olubi lonakalisa imikhwa elungileyo.” (1 Kor. 15:33) Kanye njengokuba ukungcola okuncinane kunokonakalisa amanzi acocekileyo, ubuhlobo nabo bangamoyikiyo uThixo kunokulonakalisa ulwalamano esinalo naye sitsho sicinge, sinxibe, sithethe yaye siziphathe ngendlela yehlabathi.
Indlela esizonwabisa ngayo.
Ngenxa yeteknoloji ekhoyo, kulula ukufumana lonke uhlobo lokuzonwabisa ibe oluninzi aluwafaneli tu amaKristu. UPawulos wathi: ‘Konke ukungahlambuluki makungakhe kukhankanywe kwaukukhankanywa phakathi kwenu.’ (Efe. 5:3) Kuthekani ukuba intliziyo yethu ifuna ukubukela okanye ukuphulaphula into engacocekanga? Sinokuqiqa ngelithi wonk’ umntu umele akhe aphole okanye azihlaziye ibe lukhetho lwakhe ukuba uzonwabisa njani. Kodwa simele sicinge ngesiluleko sikaPawulos singabukeli okanye siphulaphule nantoni na engacocekanga.
Ukuba siye sangamaxhoba okulahlekiswa yintliziyo sakuqhela ukuzithethelela xa siphambuka, singaphucula. (Efe. 4:22-24) Cinga ngale mizekelo mibini.
UMiguel * kwafuneka atshintshe indlela azijonga ngayo izinto eziphathekayo. Uthi: “Sinentsapho yam siphuma kwilizwe apho ukuba nezinto zeteknoloji zakutshanje nobomi obutofotofo kuyeyona nto ibalulekileyo. Kukho ixesha, endakha ndazibhokoxa ndiqokelela yonke into efumanekayo, ndicinga ukuba ndiza kuphumelela ngaphandle kokuwela kumgibe wokuthanda izinto eziphathekayo. Ndakhawuleza ndabona ukuba andinakuze ndanele zizinto eziphathekayo. Ndacela uYehova andincede kule mbono nakutyekelo lwentliziyo yam. Ndamchazela ukuba sinentsapho yam, sifuna ukumkhonza ngokupheleleyo. Sagqiba ekubeni siphile ubomi obulula ukuze sifudukele kwindawo efuna abavakalisi abangakumbi bokushumayela. Zange kube kudala sangoovulindlela. Siye sabona ukuba akuyomfuneko ukuba nentabalala yezinto eziphathekayo ukuze sonwabe ebomini.”
Oko kwenzeka kuLee kubonisa indlela okwamnceda ngayo ukuzihlolisisa ngokunyanisekileyo ukuze ahlukane nonxulumano olubi. Uthi: “Ngenxa yomsebenzi wam, ndandisoloko ndinxulumana nabathengisi abavela kwamanye amazwe. Ndandisazi ukuba kuselwa gqitha kwezo ntlanganiso, kodwa ndandikuthanda ukuba kuzo. Izihlandlo eziliqela ndandisela de ndiphantse ukunxila, ndize ndizisole emva koko. Kwafuneka ndiyihlolisise ngokunyanisekileyo intliziyo yam. Isiluleko seLizwi likaThixo, namacebiso abadala, andinceda ndaqonda ukuba eyona nto ndiyifunayo ngokuya kwezo ntlanganiso kukunxulumana nabantu abangamthandiyo uYehova. Ngoku, ndiqhuba ishishini lam ngefowuni abo bantu ndidibana nabo xa kunyanzelekile.”
Kufuneka sinyaniseke kwiziqu zethu size silwazi utyekelo lwentliziyo yethu. Xa sisenza oko, sifanele sithandaze sicele uncedo kuYehova, sikhumbule ukuba “uyaziqonda iimfihlelo zentliziyo.” (INdu. 44:21) UThixo usilungiselele neLizwi lakhe, elinokuba sisipili kuthi. (Yak. 1:22-25) Olunye uncedo zizikhumbuzo neziluleko esizifumana kwiimpampasho neentlanganiso zamaKristu! La malungiselelo, anokuyikhusela intliziyo yethu size siqhubeke sihamba kwindlela yobulungisa.
^ isiqe. 18 Amagama atshintshiwe.